လက်ဆေး၏ 10 လီတာကနေဘယ်လောက် moonshine ရရှိသော? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
လက်ဆေး၏ 10 လီတာကနေဘယ်လောက် moonshine ရရှိသော?
ငါကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်ရဲဘော်ရဲဘက်, ရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါသူတို့ဖြစ်လျှင်ဤဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငါ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေးသော်, Braga သူတို့ရဲ့မရှိခြင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျော်နှိုးဆော်သောကြောင့်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေကျွန်မသင်သိရပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ configure လုပ်ပြုမိပါလျှင် 10 mash liters နှင့်, တစ်နေရာရာမှာရ 3-3,5 55-45% သန့်စင်သော moonshine liters ။ သင်နောက်ဆုံးဒီဂရီမှမောင်းလျှင်မူကား, သင်ပိုမိုရနိုင်ပေမယ့်ပြီးတော့အရည်အသွေးနိမ့်ကြလိမ့်မည်။
သငျသညျသကြားထံမှ Braga ပြုလျှင်, ဤတွက်ချက်မှုအထဲကလှည့်: သကြားနှင့်သောတဆေး၏ဂရမ်ရေယူ41 ကီလိုဂရမ်၏ 100 လီတာအတွက်။ သကြားကောင်းသောအရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်လျှင်, ဘီယာအရက်ချက်ကတော့ 1,2 50 ထံမှလီတာလီတာရ, အသီးသီးပျမ်းမျှလီတာ 55 10-3 ဒီဂရီလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။ redistilled Quote ခွဲထုတ်သောအခါ, golovyquot; နှင့် quote; hvostyquot; လီတာ 2,5 ပါလိမ့်မယ်
ဘယ်နှစ်ယောက်လက်ဆေးဆယ်လီတာမှရရှိသော moonshine ၏လီတာ, ကိုယ့်မပြောကြဘူး။ ဒါဟာအများအပြားအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားများအတွက်စတင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး (mash) ။ အဆိုပါ moonshine ၏ဒီဇိုင်းကို။ ကောင်းပြီ, နှင့်မည်သို့သင် moonshine မောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ထိုတဆယ်လီတာအလွန်အရည်အသွေးမြင့် moonshine ၏အကြမ်းဖျင်းအကြောင်းကိုသုံးနှစ်ခွဲလီတာရသင့်ပါတယ်။ ထိုအပေါင်းအရည်အသွေးနိမ့် moonshine မောင်းထုတ်ရန် esch တစ်ဝက်လီတာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက High-အီဒြပ်ပေါင်းများနှင့် fusel အဆီများ။
ပျမ်းမျှအားတွင်, moonshine ထက်ပိုသုံးနှစ်ခွဲလီတာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ သုံးပိတ်ပွဲ၏လီတာ, နှင့်နမူနာများနှင့်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်အတွက်အခြားတစ်ဝက်လီတာရံ။ ထို့ကြောင့်, နောက်တဖန်နေဆဲ mash ဆယ်လီတာသုံးလီတာဝင်နှင့်, ထိုခံတပ်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ရန်ဆန္ဒရှိသောအရာကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,313 စက္ကန့်ကျော် Generate ။